Thursday February 06, 2020 - 12:39:12 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax xooggan oo maanta barqadii ka dhacay bartamaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Qaraxa oo lala beegsaday gaari uu watay mas'uul katirsan dowladda Federaalka ayaa ka dhacay isgoyska Taleex ee degmada Hodon waxaana ku dhintay hal qof oo ahaa darwalka gaariga halka qof kale uu dhaawac kasoo gaaray.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayay ku sheegatay mas'uuliyadda qaraxan "Mujaahidiinta ayaa qarax ku beegsaday mas'uul katirsanaa wasaaradda Howllaha guud ee Kooxda Ridada, darawalkii gaariga ayaa qaraxa ku dhintay askari ridada katirsana dhaawac ayaa soo gaaray" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qaraxa uu si dirqi ah uga badbaaday Axmed Max'med oo ah agaasimaha wasaaradda howllaha guud ee dowladda, dhinaca kale xoogag hubeysan ayaa xalay degmada Hodon ku dilay sarkaal katirsanaa ciidamada Booliska.
Rag bastoolado ku hubaysan ayaa la xaqiijiyay in ay toogasho ku dileen sarkaalka oo magaciisa lagusoo gaabiyay Mahad Bidaareey, dilalka iyo qaraxyada ka dhanka ah askarta iyo saraakiisha dowladda ayaa si joogta ah uga socda degmooyinka gobolka Banaadir.